Maxaa ka jira in uu qarka u saaran yahay garoonka Cabdullaahi Yuusuf ee Gaalkacyo in uu xirmo? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira in uu qarka u saaran yahay garoonka Cabdullaahi Yuusuf...
Maxaa ka jira in uu qarka u saaran yahay garoonka Cabdullaahi Yuusuf ee Gaalkacyo in uu xirmo?
Garoonka Diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf ee Magaalada Gaalkacyo
Gaalkacyo (Halqaran.com) – Garoonka Diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf ee Magaalada Gaalkacyo ayaa lagu soo warramayaa inuu qarka u saaran yahay in uu xirmo, kadib caqabado la soo dersay sii shaqaynta garoonkaasi.
Garoonka ayaa waxaa billihii la soo dhaafay ku yimid hoos u dhac weyn, ka gadaal markii shirkadaha duulimaadyada ay bilaabeen in ay u wareegtaan Garoonka Diyaaradaha ee Koonfurta Gaalkacyo (Ushaka).
Garoonka ay maamusho Galmudug oo muddo aan fogayn shaqaynaya ayaa waxaa ku soo xirmay inta badan shirkadihii diyaaradaha ee duulimaadyada ku taggi jiray qaybta ay Puntland maamusho.
Tani ayaa waxaa lagu sababeeyay in shirkadaha ay ka carareen canshuuraha badan ee looga qaadi jiray Garoonka Cabdullaahi Yuusuf, isla-markaana ay garowsadeen in ay ka canshuur yar tahay Garoonka Koonfur Gaalkacyo.
Rakaabka ayaa lacago ka badan midka Koonfurta Gaalkacyo looga qaadi jiray Garoonka Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ku yaala. Canshuurta laga qaado dadka ka dhoofaya iyo kuwa kale ee ka soo degaaya garoonkaasi ayaa aad uga badan canshuurta dadka socotada ah looga qaado Garoonka Ushaka.
Caqabadda kale ee looga yaacay Garoonka Cabdullaahi Yuusuf ayaa waxaa lagu sheegay, iyadoo aan muddooyinkii ugu dambeysay garoonkaasi lagu samaynin wax dayactir ah.
Dhaqaalaha ka soo xarooda Garoonka Cabdullaahi Yuusuf oo muhiim u ah Maamulka Puntland ayaa waxaa ku yimid hoos u dhac weyn, ka dib markii ay ka weecdeen macaamiishii adeegsan jirtay.
Arrimahan oo is biirsaday ayaa suurtagal ka dhigaya in uu xirmo Garoonka Cabdullaahi Yuusuf, haddii aanay Puntland qaadin tallaabooyin ay si deg deg ahi wax uga qabanayso arrimahaasi.
Garoonka Diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf
oo qarka u saaran inuu xirmo